२५ लाख पुरस्कार सहित सांगीतिक रियालिटी शो ‘नेपाली तारा’को तेश्रो सँस्करण हुने « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
२५ लाख पुरस्कार सहित सांगीतिक रियालिटी शो ‘नेपाली तारा’को तेश्रो सँस्करण हुने
नेपाली सांगीतिक रियालिटी शो ‘नेपाली तारा’को तेश्रो सँस्करण हुने भएको छ । जसका लागि भाद्र दोश्रो साता देखी अडिसन सुरु हुनेछ । सोमवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सन् २००५ बाट सुरु भएको उक्त रियालिटी शो तेश्रो सँस्करणमा आइपुग्न विविध कारणले गर्दा ढिला भएको जानकारी गराईयो । ‘नेपाली तारा’ नेपालको सबैभन्दा ठुलो सांगीतिक रियालिटी शो भएको दावी गरेको छ ।
वरिष्ठ संगीत निर्देशक प्रकाश गुरुङ्, वरिष्ठ संगीत कम्पोजर तथा गीतकार शुरेस अधिकारी र प्रसिद्द गायक रामकृष्ण ढकाल ‘नेपाली तारा ३’को मूख्य निर्णायक रहेका छन् । साथै गायक तथा संगीतकार जेम्स प्रधान र राजन इशानले अन्तिम २० जना प्रतियोगिलाई मेन्टोर जजको रुपमा प्रशिक्षण दिने बताईएको छ ।
भाद्र दोश्रो हप्ता अडिसनको पहिलो भाग अन्तर्गत काठमाण्डौको डिल्लीबजार, नयाँबजार र चावहिलका साथै ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, धरान, बुटवल र नारायणगढमा हुनेछ । त्यस्तै वाइल्ड कार्ड इन्ट्रिको लागि मोबाइल अडिसन पनि गर्न लागिएको बताईएको छ ।
यस प्रतियोगिताको बिजेताले एक थान मोटरसाइकल सहित रु. २ लाख ५१ हजार नगद पुरस्कार र नेपाली ताराको रुपमा ३ वटा गीत गाउने अवसर पाउने छन् । अन्तिम १० प्रतियोगी प्रत्येकले रु. ११ हजार नगद पुरस्कारका साथ बिशेष टप १० एल्बममा एउटा गीत गाउन पाउनेछन् । अन्तिम २० प्रतियोगीहरुले मुख्य साझेदारद्वारा म्यूजिक स्टाइल र व्यक्तित्व विकासको मौका पाउनेछन् । ‘नेपाली तारा’ विजेताले अष्ट्रेलिया ट्रिपमा जान र सिड्नी र मेलवर्नमा हुने कन्सर्टमा प्रस्तुती दिने मौका पाउनेछन् ।
यो गायन प्रतियोगिताका सबै विजेताले समग्रमा २५ लाख बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको राशी बढ्न सक्ने आयोजकले बताएको छ । मल्टिनेशनल कम्पनी कोकाकोलाले ‘नेपाली तारा’को तेश्रो सँस्करणलाई प्रायोजन गरेको छ ।
नेपाली ताराको पहिलो सँस्करणमा अहिलेका प्रख्यात गाएक दिपक लिम्बु विजेता भएका थिए भने अर्की प्रख्यात गायिका इन्दिरा जोशी महिला तर्फ विजेता भएकी थिइन् । त्यस्तै दोश्रो सँस्करणमा अहिलेका व्यस्त गायक सन्तोष लामा विजेता भएका थिए ।